Kuziva kuti maAustralia vanokwazisana sei | Absolut Kufamba
Isabel | | Ositireriya
Kana pazororo rako rinotevera iwe uchida kutora rwendo kuenda kuAustralia kana uchida kuenda kunodzidza munyika ino, chimwe chezvinhu zvaunofanira kuziva kukurumidza kuchinjira kuhupenyu kune tsika dzayo netsika dzezuva nezuva.
Kune vamwe vanhu vanogara munyika nyowani zvinogona kukonzera tsika kuvhunduka, kunyanya pavanenge vava kujairira nharaunda yavo nyowani. Kugara munharaunda yakaita seyeAustralia pane zvinhu zvakati wandei zvaunogona kuita, izvo zvinokubatsira kuti uchinjike nekukasira uye unzwe sehove iri mumvura.
Pakutanga kusangana nevanozvarwa, kungave kukumbira nzira kana rumwe ruzivo, uchafanirwa kuvakwazisa uye kuzvizivisa pachako nenzira kwayo. Neichi chikonzero, muchinyorwa chino ticha dzidza kuti maAustralia vanokwazisana sei.
1 Chii chakaitwa neAustralia?
2 Kwaziso sei kuAustralia?
3 Ndeapi mafomula anoshandiswa kukwazisa muAustralia?
4 Mharidzo dzakadii?
5 MaAustralia vanokwazisana sei kumafaro?
6 Dzimwe nzira dzekukwazisa munyika dzeCommonwealth
Chii chakaitwa neAustralia?
Vanozivikanwa se "maAussies" maAustralia kazhinji vane hushamwari, vakatendeka, vanowirirana uye vasina kurongeka mukubata kwavo. Ivo vanonakidzwa nhanho yakanaka yedzidzo, iyo inoshandura mumikana yakawanda yemabasa uye nemhando yepamusoro yehupenyu. Iyo yekupedzisira inoratidzirwa mune yavo hushamwari, yakavhurika uye yakasununguka hunhu.
VaAustralia vanhu vakareruka vanokoshesa kwazvo kushanda nesimba, vasingasiyanisi pakati pemakirasi enharaunda. Ivo vanozivikanwa nepfungwa dzakashama, kuremekedza dzimwe tsika uye kugamuchira kwavo kune vekunze. Muchidimbu, maAustralia vanhu vane hushamwari, vepedyo uye vane hushamwari.
Kwaziso sei kuAustralia?
Kana tichitaura nezvekuti kukwazisa sei kuAustralia, tinofanirwa kufunga mamiriro ezvinhu kusangana uko kunotanga hurukuro kunoitika. Mune mamwe mazwi, mhuri isina kurongwa kana shamwari inoungana haina kufanana nemusangano webasa wakanyanya.
Semuenzaniso, maAustralia pakati peshamwari vanokwazisana nenzira yerudo: nekutsvoda padama kana kumbundira kapfupi. Zvino, ungave musangano webhizimusi kana wekuyunivhesiti, maAustralia vanokwazisana zvine mutsindo uye zvine mutsindo nekubata maoko nekunyemwerera.
Zvinoenderana netsika dzeAustralia uye sedzimwe nyika zhinji, kukwazisa kunofanirwa kutanga nekupera kwemusangano, pamwe nevaenzi vanogona kunge vachisvika pamusangano.
Uye zvakare, maAustralia vanogara vachitaura kune vamwe vanhu vachishandisa mazita avo kunyangwe mumusangano wekutanga saka zvakakosha kuti iwe ubate nemusoro mazita evapinduri vako kana vaunzwa kwauri. Zvakakoshawo kutarisa kumeso paunenge uchikwazisa mumwe munhu. Ichi chiratidzo chekuremekedza uye zvakare zvinoratidza kuti iwe uri kuteerera uye kuteerera kune izvo mumwe munhu ari kutaura.
Ndeapi mafomula anoshandiswa kukwazisa muAustralia?
G'day: Chidimbu che "Zuva rakanaka" ndiyo nzira yakajairika uye isina kurongeka yekukwazisana uye inonzi "gidday." Inogona kushandiswa zvese masikati neusiku.
"Ow ya goin 'mate?": Ndiyo nzira yakapfupikiswa yeanozivikanwa "Uri kuenda sei shamwari?" zvinoreva kuti wakadii.
"Cheerio": Ndaiwanzotaura kutaura zvakanaka.
"Cya Iyi Arvo": Sezvauchaona, maAustralia anofarira kupfupisa mazwi. Fomura iyi zvinoreva kuti "Toonana nhasi masikati." Ivo vanoshandisa chirevo arvo kureva masikati mune ese mamiriro.
"Hooroo": Zvinoreva kukuona gare gare.
"Toodle-oo": Imwe nzira yekuonekana nayo.
"Mangwanani akanaka Mangwanani."
"Ndaswera": Maswera sei.
"Manheru akanaka": Manheru akanaka.
"Husiku hwakanaka Husiku hwakanaka.
"Ndafara kukuziva": Ndafara kukuziva.
"Ndafara kukuona": ndafara kukuona.
Mufaro: Maita basa.
«Ta»: Maita basa.
Kana zvasvika pakuratidzira vese varume nevakadzi mune yakasarudzika mamiriro, mazwi "Señor", "Señora" uye "Señorita" anoshandiswa kuve "Mr.", "Mai" uye "Miss" matauriro avo akasiyana muChirungu.
Kana iri mharidzo isina kurongwa pakati peboka reshamwari, zvirevo zvakaita sekuti "Iyi ishamwari yangu Peter" (ishamwari yangu Peter) kana "Uyu ndiye wandinoshanda naye Ann" (ndiAna, wandinoshanda naye) anogona kushandiswa .
MaAustralia vanokwazisana sei kumafaro?
Iwe unogona kushandisa chero emafomula andakaratidza mundima dzapfuura. Nekudaro, zvinofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti kana ukakokwa kumabiko kana bhengi itsika kwauri kuti uuye nechimwe chinhu chekumwa (semuenzaniso doro, waini kana zvinwiwa) kuti unakidzwe neboka rako neako.
Zvakare, muAustralia inofungidzirwa hunhu hwakanaka kutaura nemubati wepati kuti uone kana vachida kana kuda kuti iwe uuye nechimwe chinhu. Kune rimwe divi, kana iwe ukakokwa kuzodya kumba kwemumwe munhu, itsika kuunza chipo kumuridzi paunosvika, senge ruva remaruva, bhokisi remachokoreti kana bhodhoro rewaini.
Dzimwe nzira dzekukwazisa munyika dzeCommonwealth
Commonwealth mubatanidzwa wekuzvidira wenyika dzinopfuura makumi mashanu dzine hukama, hwenhoroondo netsika, mazhinji acho ari echirungu mutauro wepamutemo.
Kunyangwe nyika yega yega iine hurongwa hwayo hwezvematongerwo enyika uye yakazvimiririra, vamwe vakaita seAustralia kana Canada vanoramba vachichengetedza hukama nehumambo hweBritain. Saka unokwazisa sei munyika dzenhengo dzeCommonwealth senge Canada kana England?
MaCanada vamwe vevanhu vane hushamwari kwazvo pasirese, izvo zvinoshandura kuita kukwazisa kwavanoshandisa kudyidzana nevamwe.
Semuenzaniso, muQuebec kukwazisa kunonyanya kushandiswa ndi "Bonjour" uye "vaa va?" vachiri muMaritimes vanhu vanokwazisana neyakareruka "Mhoro" kana "Hi" ichiteverwa neane hushamwari "How ya 'doin'?" Kune rimwe divi, Ontario neToronto vanoshandisawo mafomula akafanana.
Zvinonzi Alberta neSaskatchewan ndimo munogara vanhu vane hushamwari munyika uye unogara uchiwana vanhu vanoda kutaura kusiyana nemaguta makuru mune vanhu vanowanzo mhanya.
Nzira yakajairika inoshandiswa neChirungu kukwazisana ndeyekubata maoko Uye zvakajairika kuzviisa mukushandisa kana mumwe munhu akaunzwa kune mumwe munhu kana asati atanga musangano mune bhizinesi renyika.
Kazhinji anongokwazisa nekutsvoda pane rimwe rematama kana vapindiri vari shamwari kana vaunoziva uye paine rudo pakati pavo. Kusiyana nenyika dzakaita seSpain, hachisi chinhu chakajairika kugara uchikwazisa nekutsvoda.
Dzimwe nzira dzekukwazisa nadzo ndedzekuti:
"Mhoro kana Hi": Zvinoreva "mhoro".
"Unoita sei?": Zvinoreva kuti uri sei uye zvinowanzo taurwa mumamiriro epamutemo achiperekedzwa nekubatwa ruoko.
"Makadii?": Zvinoreva zvakare kuti "wakadii iwe" asi inoshandiswa mune zvisina kujairika mamiriro. Inowanzo pindurwa ne "Ndaswera zvakanaka ndatenda, newe?" zvinoreva kuti "Ndiri mushe, maita basa, nemi?"
"Ndafara kukuziva": Uyu mutsara unoreva "ndafara kusangana newe" uye unowanzo taurwa uku uchikwazisana. Inowanzo pindurwa ne "ndafara kusangana newewo" (ndafara kusangana newewo) uye inowanzo taurwa uku uchikwazisana.
«Ndafara kusangana newe»: Ndiyo imwe fomula kuratidza kuti mumwe munhu anofara kusangana nemumwe munhu. Kuti upindure, "zvakare" inowedzerwa panoperera chirevo sezvakaitika mune yapfuura nyaya.
Shandisa aya matipi madiki mumisangano yako yemberi mune yegungwa nyika uye iwe unozokwazisa seyechokwadi "Aussie"!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kuziva maAustralia kukwazisana
avo carepenis vanokwazisana senge ngochani uye kuyamwa jongwe varume nevakadzi fart uye kuseka ngochani uye kubata dhongi ravo uye matinji uye munwe mbongoro yavo kwemaawa 3000 kuita bonyora uye kupera kwe shitddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Pindura kuna steven